Liis Hubinta Fudud ee Amniga ee Goobaha WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Liis Hubinta Amniga Fudud ee Goobaha WordPress
Liis Hubinta Amniga Fudud ee Goobaha WordPress
Ma ogtahay in ka badan 100,000 mareegaha in la jabsado maalin kasta? Taasi waa sax, dambiyada internetka ayaa khatar weyn ku ah shirkad kasta, iyo qof kasta oo leh barta WordPress sidoo kale ammaan ma aha. Waxaan la ordayay hackers (oo ay ahayd inaan ka soo kabsado boggayga WordPress), waxaana laga yaabaa inaad ogtahay inay fool xun tahay.
Hackers-ku waxay si firfircoon u raadiyaan mareegaha nugul si ay u jabiyaan oo ay u xadaan xogta ay u sii dayn karaan faa'iido lacageed ama ujeedo xaasidnimo saafi ah. Si aad u ilaaliso naftaada iyo goobtaada qaaliga ah, waa inaad si dhab ah uga fakartaa adkaynta ammaankaaga WordPress.
Anagoo tixgalinayna inaad lumin doonto dakhliga, wakhtiga, iyo dadaalka marka tuugadu jabsadaan mareegahaaga, waxaanu samaynay liiska hubinta ee soo socda oo aad isticmaali karto si aad u sugto degelkaaga WordPress. Dhammaan walxaha amniga ee ku jira boostada waa kuwo fudud in la hirgeliyo xitaa kuwa ugu horreeya:
Cusbooneysii Mawduucyada & Plugins
Adeegso Kelmado Gaar ah & Xoog Leh
Ku rakib Plugin Amniga WordPress
Dooro Hosting Great WordPress
Isticmaal SSL (HTTPS)
Samee kaabta goobta oo dhamaystiran
Isticmaal Firewall-ka Codsiga Mareegta (WAF)
Dami Tafatirka Faylka ee Maamulka WordPress
Hubi boggaga galitaanka
Ka bax Isticmaalayaasha Aan Firfircoonayn
Sawirka Malware & Arrimaha
Sida aad arki karto, waxaanu u jebin doonaa boostada qaybo badan oo daboolaya wax kasta laga bilaabo doorashada martigeliyaha ammaan ah ilaa adkaynta aaggaaga maamulka iyo kuwa kale. Waxaad u baahan doontaa inaad ku celiso qaar ka mid ah hawlaha amniga, sida inaad si joogto ah u cusbooneysiiso mawduucyadaada. Hawlaha kale waa shay hal mar ah, laakiin wali waxay saameyn weyn ku leeyihiin ilaalinta goobtaada ammaan. Hubi waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso, oo isla markiiba samee sababtoo ah hackers-ku waqti kuma lumin.
1. Cusboonaysii WordPress
Xudunta WordPress si joogto ah ayaa loo xisaabiyaa oo loo hubiyaa baylahda amniga. Haddii cilladaha amniga iyo cilladaha la ogaado, horumariyeyaasha xudunta ah ayaa badanaa siidaaya cusbooneysiinta dayactirka. Cusbooneysiin yar ayaa si toos ah loogu rakibay degelkaaga WordPress.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa inaad gacanta ku cusboonaysiiso WordPress dhammaan siidaynta waaweyn. Waa habsocod hore u toosan tan iyo markii aad ka heshay fariin murugo leh maamulahaaga WordPress. Kaliya 22% shabakadaha waxay ku shaqeeyaan nooca ugu dambeeyay ee WordPress, taas oo ah murugo marka la eego sida ay u fududahay in la cusbooneysiiyo.
Ha ku jirin inta soo hartay 78% maadaama aad si dhab ah u soo bandhigayso goobtaada weerar kasta oo aadan cusboonaysiin website-kaaga. Caadi ahaan, haakarisku waa kooxdii ugu horreysay ee dadka si ay u bartaan wax ku saabsan dayacanka noocyadii hore, tan iyo markii ay ku xisaabtamaan ceebaha si ay u bilaabaan weeraro guul leh.
Kahor intaadan cusboonaysiin WordPress waxaan kugula talineynaa inaad akhrido qoraalada siideynta si aad u aragto waxa isbedelay oo aad u qaadato kaydka mareegahaaga (si aad u badbaado kaliya). Sidan hadda waxaad filan kartaa markaad gujiso badhanka cusbooneysiinta, oo aad leedahay guuldarro haddii ay wax xumaadaan.
2. Cusbooneysii mawduucyada & Plugins
Markaad cusboonaysiinayso xudunta WordPress, ha ilaawin inaad sidoo kale cusboonaysiiso mawduucyadaada iyo pluginskaaga. Hackers waxay si gaar ah u jecel yihiin mawduucyo hore iyo plugins leh godad ammaan oo la yaqaan.
Waxay ka faa'iidaystaan ​​dayacanka amniga waxayna xitaa ku qarin karaan albaabka danbe mawduuc hore ama plugin. Haddii aadan cusbooneysiin, waxay jabsan karaan mareegahaaga mar kasta oo ay ka farxiyaan.
Si looga fogaado luminta qaababkaaga caadada u ah, waxaan kugula talineynaa isticmaalka mawduuca ilmaha WordPress oo ka soo horjeeda mawduuca waalidka. Habkaas, ma lumin doontid is-habayntaada markaad cusboonaysiiso mawduucaaga.
Waa inaad sidoo kale tirtirtaa mawduuc kasta oo aan firfircoonayn, plugins, iyo rakibaadyada WordPress ee aan la isticmaalin. Ma aha oo kaliya inaad badbaadin doonto xawaaraha xawaaraha oo aad ka dhigto boggaaga si dhakhso ah, laakiin sidoo kale waxaad ilaalin doontaa hackers-ka.
Qoraal kale oo degdeg ah, waligaa ha soo dejin mawduucyada premium-ka ah ee “nulled” iyo plugins. Kaliya raac ilo lagu kalsoon yahay sida WordPress.org, Envato, ama dukaanka mawduucyada kale ee sumcadda leh.
3. Isticmaal erayo sir ah oo gaar ah & xoog leh
Waxaad la yaabi doontaa inaad ogaato in inta badan mareegaha la jabsado marka niman xunxun ay xadaan macluumaadkaaga gelitaanka Intaa waxaa dheer, weerarrada xoogga ah waa wax caadi ah oo ku lug leh in lagu qarxiyo boggaga galitaanka kumanaan magac-user-password isku-dar ah ilaa wax laga helayo.
Haddii aad isticmaasho magac-isticmaalka iyo furaha sirta ah (sida "admin" ama "12345") ee caanka ah waxaad si cajiib ah u fududaynaysaa inay jabsadaan shabakadaada. La caadeysto abuurista furaha sirta ah ee gaarka ah oo xooggan oo aad si joogto ah u beddesho. Waxaad xitaa isticmaali kartaa koronto-dhaliye online ah oo bilaash ah, sida kan LastPass.
Maareynta furaha sirta ah ee xoogga badan waxay noqon kartaa dhibaato. Si aan u caawiyo, waxaan inta badan ku tiirsanaa maamulayaasha sirta ah sida 1Password ama LastPass, iyo kuwo kale. Dib ha u isticmaalin furaha sirta ah ee isku midka ah shabakado badan, oo had iyo jeer ilaali macluumaadkaaga galitaanka mid ammaan ah. Hubi in isticmaaleyaashaada WordPress ay sidoo kale isticmaalaan furaha sirta ah ee adag.
Inta aad ku jirto - xasuusnoow inaad u isticmaasho furaha sirta ah ee xoogga leh iimaylkaaga, cPanel, xogta MySQL, iyo xisaabaadka FTP sidoo kale.
4. Ku rakib Qalabka Amniga Amniga WordPress
Mar kasta oo aan abuuro defacto defacto bog cusub oo WordPress ah, waxaan inta badan haystaa dhowr plugins oo aan si toos ah ugu rakibo. Waxaan helaa plugin anti-spam ah, Foomka Xiriirka 7, Koodadka gaaban ee Symple, iyo iThemes Security, oo aan tago-to plugin security WordPress.
Plugin-ku waxa uu ii ogolaadaa in aan xoojiyo difaacyada WordPress-ka anigoon dhididka jabin. Waxay la socotaa sifooyin badan oo ka dhigaya kuwa xun ee ka ilaalinaya mareegahayga neecaw. Habaynta plugin waa super duper fudud; waa in aad kacdo oo aad kacdo wakhti yar gudaheed.
Plugins-yada ugu wanaagsan ee amniga WordPress ayaa ku siinaya astaamo kala duwan, markaa iska hubi inaad hubiso ka hor intaadan rakibin si aad u hubiso inaad helayso dhammaan astaamaha aad u baahan tahay si aad u sugto dhammaan degelkaaga, iyada oo aan loo eegin sida gaarka ah. Tilmaamaha caadiga ah waxaa ka mid ah iskaanka malware-ka, xannibaadda IP-ga, ka-hortagga xoogga-xoogga ah, xaqiijinta laba-geesoodka ah, iyo waxyaabo kaloo badan - hubinta in badan oo ka mid ah sanduuqyada liiska hubinta amniga ee aad hadda akhrinayso!
5. Dooro Great WordPress Hosting
Caadi ahaan, bilawga bilawga ah waxay u soo baxaan xirmada martigelinta raqiis ah ee ugu horreysa ee ay la kulmaan. Kuuma qaban doono adiga mar haddii aadan si fiican u garanayn, laakiin su'aal ahaan raqiis (ama xitaa bilaash) martigelinta la wadaago waxay kuu soo bandhigi kartaa khataraha amniga. Runtii tan waan ogahay tan iyo markii la i jabsaday laba shirkadood oo kala duwan oo martigelinaya oo bixiya martigelinta la wadaago.
Martigelinta la wadaago waxay ku lug leedahay la wadaaga server-ka kumanaan mareegaha kale. Tani waxay kordhinaysaa halista wasakheynta goobta. Taasi waa, hacker-ku wuxuu geli karaa goobtaada xitaa haddii mareegaha qof kale uu ahaa barta asalka ah ee weerarka.
Martigelinta WordPress ee la maareeyay, dhanka kale, waxay diiradda saartaa mareegaha WordPress oo keliya. Ma la wadaagaysid adeegaha dadka kale, oo waxaad helaysaa doorashooyin badan oo ammaan ah si aad ammaan ugu ahaato. Waxay bixiyaan taageero u go'an sidoo kale, iyo doorashooyin badan oo soo kabasho ah haddii ay ugu xun dhacaan.
Haddii ay tahay inaad isticmaasho martigelinta la wadaago, dheh waxaad ku bilaabaysaa baloog aan weli lacag samayn, hubi in goobuhu yihiin kuwo go'doonsan, ama "xabbis." Haddii aad maamusho ganacsi ama degel eCommerce, waxay ku bixinaysaa inaad isticmaasho martigelinta WordPress ugu fiican ee aad ku haboon karto miisaaniyadaada ereyga go - sida VPS, go'an, ama martigelinta WordPress la maareeyo.
6. Isticmaal SSL (HTTPS)
Maalmahan, shirkado badan oo martigelinaya WordPress ayaa bixiya shahaadooyin SSL bilaash ah oo ka yimid ereyga go iyo sabab wanaagsan. Shahaadooyinka SSL waxay ka dhigaan degelkaaga mid ka ammaan badan meelaha aan lahayn SSL. Google waxa kale oo ay ku talinaysaa in la isticmaalo shahaadooyinka SSL si loo ilaaliyo xogta degelkaaga (oo hubi in isticmaalayaashu ogaadaan inaad isticmaasho SSL iyo in kale).
HTTPS waa ka amaan badan yahay HTTP-gii ka horeeyay. Mareegta adeegsata HTTPS waxay siraysaa dhammaan xogta u dhaxaysa browserka isticmaalaha iyo adeegayaashaada. Hadii uu jabsado isgaadhsiinta, waxa ay helayaan kaliya xog sir ah oo faa'iido u leh sida nin hal lug leh oo ku jira tartanka dabada 🙂
Ku rakibida shahaadooyinka SSL ee inta badan martigeliyayaasha webka waa u fududahay sida A, B, C. Inta badan waxay bixiyaan rakibayaal hal-guji ah oo ka dhigaya habka oo dhan mid fudud. Kaliya gal cPanel-kaaga oo dhagsii hal badhan si aad u rakibto oo aad u maamusho shahaadooyinkaaga SSL. Haddii aad jeclaan lahayd hab-gacmo badan oo dheeraad ah, tixgeli inaad hubiso Aynu Sirinno.
7. Samee kaabta goobta oo dhamaystiran
Markii ay tuugadu i rideen, waa inaan dib u dhis ku sameeyaa mareegahayga meel eber ah, madax xanuun aan ka fogaan lahaa haddii aan si kalsooni leh u xasuusto in aan kaydiyo WordPress.
Laakiin maya, kaydkii la jiray martigeliyaha mareegta ayaa la kharribmay intii lagu jiray weerarka, iyo maya, ma aanan helin xal labaad oo gurmad ah. Xaalad caadi ah oo ah inaad dhammaan ukumahaaga ku riddo hal dambiil taasoo i bartay cashar adag.
Maalmahan, waxaan abuuraa nuqullo degel oo buuxa oo ay ku jiraan faylasha boggayga iyo xog-ururinta. Inta badan waxaan isticmaalaa Maareynta WP, laakiin sidoo kale waxaan isticmaalaa Duplicator plugin si aan u kaydiyo kombayutarkayga iyo Google Drive-ka.
Waxaan kugu boorrinayaa inaad si joogto ah u abuurto gurmad buuxa. Qaar badan oo ka mid ah xalalka kaydka ah ee WordPress ayaa kuu oggolaanaya inaad si otomaatig ah u socodsiiso geeddi-socodka oo dhan, ku badbaadiya waqti oo ku siinaya xasilloonida maskaxda.
8. Isticmaal Arjiga Webka Firewall (WAF)
Si aad lakab dheeraad ah oo ammaan ah ugu darto boggaaga WordPress, oo aad si fiican u seexato habeenkii, awood u geli firewall webka (WAF). WAF waxay ilaalisaa mareegahaaga iyadoo xannibaysa taraafigyada xaasidnimada leh waqti dheer ka hor intaysan gaarin goobtaada. Waa qiyaas firfircoon oo lagu joojinayo niman xun oo ku dhintaan jidkooda ka hor inta aysan waxyeello geysan.
Firewall-ku waxa uu shaandheeyaa taraafikadaada soo galaya, isaga oo meesha ka saaraya hackers-ka iyada oo u ogolaanaysa isticmaalayaasha sharciga ah. Shirkado badan oo amniga WordPress ah ayaa bixiya dab-damiska codsiga webka oo ay weheliyaan astaamo kale. Ikhtiyaarada caanka ah ee warshadaha waxaa ka mid ah Sucuri iyo Cloudflare.
9. Dami File Editing in WordPress Admin
WordPress CMS wuxuu la socdaa tifaftire kood cajiib ah kaasoo kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho plugin iyo faylalka mawduucyada gudaha dashboardkaaga maamulka WordPress. Tifaftiraha koodka waa qalab aad u fiican oo aad adigu gacanta ku hayso, laakiin gacmaha khaldan, haakarisku waxay u isticmaali karaan inay waxyeeleeyaan ama ku daraan malware-ka boggaaga.
Had iyo jeer waxaad wax ka beddeli kartaa mawduucaaga iyo feylashaaga plugins (haddii loo baahdo) adiga oo sii maraya FTP ama maamulaha faylka cPanel, taas oo macnaheedu yahay inaad gebi ahaanba joojin karto tifaftiraha koodka ee WordPress. Uma baahnid in tuugada galaangal u yeeshaan aaggaga maamulka WordPress si ay u helaan tifaftiraha koodka, sababtoo ah waxay sababi karaan waxyeelo badan oo leh dhowr sadar oo kood ah.
Maxaa la sameeyaa? Waxaad joojin kartaa tifaftiraha koodka ku dhex jira adiga oo isticmaalaya plugin Sucuri Security oo bilaash ah. Haddii kale, waxaad ku dari kartaa koodka soo socda Conciliation config.php faylka:
// Diid wax ka beddelka faylka ('DISALLOW_FILE_EDIT', run);
10. Ilaali boggaga galitaanka
Sida caadiga ah, foomka login on your WordPress wuxuu leeyahay laba goobood; username iyo password. Iyadoo weeraryahannada xoogga ah iyo bots-ku ay sii kordhayaan maalinti, sidee ayaad uga joojin kartaa hackers-ka inay galaangal u yeeshaan aagga maamulkaaga WordPress? Way fududahay; waxaad ku dartay CAPTCHA ama su'aalaha amniga ee adkeynaya qof kasta inuu galo gal aan la ogalayn.
Oo uma baahnid inaad wax ka beddesho koodka ku dar CAPTCHA or su'aalaha amniga Boggaga galitaanka. Waxaa jira plugin caan ah oo WordPress ah oo loo yaqaan WP Security Su'aasha oo ay fududahay in la habeeyo oo la isticmaalo. Haddii aad jeclaan lahayd inaad isticmaasho CAPTCHA, waxaad isticmaali kartaa Simple Login Captcha, WordFence, ama mid ka mid ah xulashooyinka kale ee badan ee bilaashka ah ee laga heli karo WordPress.org.
Isla markaana, waad awoodaa beddel URL-kaaga wp-login wax gaar ah. Habkaas, bots, iyo haakarisku waxay yeelan doonaan waqti adag inay isku dayaan inay qiyaasaan URL boggaaga gelitaanka. wp-login ayaa mar hore caan ku ah hackers-ka, sidaa darteed waxay macno fiican ka dhigaysaa in URL loo beddelo shay kale. Waxaad isticmaali kartaa plugin sida WPS Hide Login.
11. Ku dar Xaqiijinta
Intaa waxaa dheer, tixgeli hirgelinta xaqiijinta laba-factor iyo multi-factor. Haddii ay dhacdo in jabsiga uu galo tafaasiishaada gelida, ma awoodi doonaan inay galaan boggaga WordPress. Waxaa jira doorashooyin badan oo la heli karo, laakiin Google Authenticator waa doorasho caan ah.
Wixii aan intaas ahayn, xaddid galitaanka boggaga galitaanka. Haddii booqde uu isku dayayo inuu ku galo akoon aan jirin ama uu isku dayayo inuu galo marar badan, waxay u badan tahay inay yihiin hacker ama bot isku dayaya inuu xoog ku galo gudaha. Waxaad isticmaali kartaa plugin sida Limit Login. Isku dayo ama Login Lockdown si aad uga fogaato canaasiirtan faragelinta ah.
12. Log Out Users Active
Markaad haysato shabakad isticmaaleyaal badan oo WordPress ah, si buuxda uma maamuli kartid sida ama halka isticmaalayaashu ay ka galaan mareegahaaga. Qoraagu waxa uu go'aansan karaa in uu isticmaalo Wi-Fi-ga guud ee dadweynaha si uu u sameeyo taabashadii u dambaysay ee maqaal. Naqshadeeye mareegaha ayaa laga yaabaa inuu ka tago miiskiisa oo uu ka soo laabto nasashada qadada hal saac ah.
Xaaladahan oo kale, isticmaalahaagu waxa laga yaabaa inuu u soo bandhigo mareegahaaga khataro amni isagoon ogayn. Qofka xaasidka ah ayaa laga yaabaa inuu la wareego fadhigiisa, wax ka beddelo faahfaahintiisa, oo uu si fudud u burburiyo. Haddii qolada aan la ogalayn ay garanayaan waxay samaynayaan, waxay si fudud ula wareegi karaan akoonka isticmaalaha oo ay waxyeello u geysan karaan.
Maxaa la sameeyaa? Waxaad si toos ah uga bixi kartaa isticmaalayaasha aan firfircoonayn kadib muddo hore loo qeexay. Iyo qaybta ugu fiican? Waxaa jira plugins ujeedadan saxda ah. Mid ka mid ah ikhtiyaarka caanka ah waa plugin Logout-ka aan firfircoonayn kaas oo ay ku jiraan ikhtiyaarrada lagu habayn karo wakhtiga shaqo-la'aanta ah ka hor inta aan la bixin, fariinta soo baxay ee caadada u ah ama dib u jiheynta marka la baxo, iyo wakhti goynta iyadoo la raacayo doorka isticmaale.
13. Ka baadh Malware & Arrimaha (si joogto ah)
Inta badan waa la illoobay, iskaan-ku-ururinta degelkaaga WordPress si joogto ah waxay kaa caawin kartaa inaad hore u ogaato dhibaatooyinka amniga. Waxay ku qaadanaysaa ilbiriqsi kaliya in tuuggu jabsado mareegahaaga oo uu sameeyo wax kasta oo xun. Tani waa sababta saxda ah ee aad ugu baahan tahay inaad mar walba waxka sarreyso.
Qaar badan oo ka mid ah plugins amniga WordPress si ay u baadho caabuqyada malware-ka, dayacanka amniga ee la yaqaan, qoraallada duugoobay, weerarrada xoogga ah, kaydinta aan jirin, iyo wixii la mid ah. Plugins-yadu waxay kuu soo dirayaan warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan dhibaatooyinka la yaqaan, si aad u hagaajiso ama aad u kiraysto xirfadle.
Waxaa jira sawir-qaadayaal badan oo mareegaha ah, sida Sucuri SiteCheck, oo aad isticmaali karto si aad ugu hubiso goobtaada si toos ah. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa geli URL-kaaga, qalabkuna wuxuu si toos ah u eegi doonaa mareegahaaga. Intaa ka dib, waxay ku siinayaan warbixin ku saabsan waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso. Markaad hesho warbixinta, hagaaji dhammaan dayacanka amniga isla markaaba.
14. Isticmaal VPN
Haddii aad maamusho shabakad sidda macluumaad xasaasi ah oo aan waligiis ku dhicin gacanta tuugta, tixgeli inaad isticmaasho shabakad khaas ah oo khaas ah (VPN), si ka sii badan markaad isticmaaleyso Wi-Fi dadweyne oo bilaash ah. VPN-ku wuxuu kaa ilaalinayaa weerarrada dhex-dhexaadka ah ee ku badan shabakadaha dadweynaha, oo ay ku jiraan guriga iyo shaqada.
Shabakad khaas ah oo khaas ah ayaa hubisa in xitaa haddii weeraryahanadu ay galaan nidaamka oo ay xadaan macluumaadkaaga, waxba ma samayn karaan xogta ay kaa qaadaan. Haddii aad leedahay shabakad internet ah oo aad dad badan la wadaagayso, had iyo jeer isticmaal VPN ka hor inta aanad marin aagga maamulkaaga WordPress.
Doorashooyinka kale ee Amniga WordPress
Ma u baahan tahay wax badan oo la sameeyo? Waxaan jeclaan lahayn inaan mar walba ilaalino degelkaaga, markaa halkan waxaa ah agab ammaan oo gunno ah oo lagu daro liiska hubintaada:
Dami fulinta faylka PHP gudaha /wp-content/wp-uploads/
Beddel horgalaha xogta xogta WordPress
Furaha sirta ah ayaa ilaaliya maamulahaaga iyo boggaga galitaanka ee dhinaca server-ka
Dami tusmaynta hagaha
Dami WP REST API iyo XML-RPC haddii aan loo baahnayn
Ha tafatirin/ bedelin xudunta WordPress – qor ama isticmaal plugin ku siinaya shaqada aad u baahan tahay
Hubi in website-kaagu uu wado noocii ugu dambeeyay ee PHP
Ku isticmaal barnaamijka ka hortagga kombiyuutarkaaga
Daar Google Search Console
Iska yaree XSS iyo SQL dayacanka duritaanka (waxaa laga yaabaa inaad u baahato qof tignoolajiyada dheereeya si uu labadan uga caawiyo)
Runtii, tirada tillaabooyinka aad qaadi karto si aad u ilaaliso goobtaada waa mid aan dhammaad lahayn. Laakin haddii aad iska hubiso 14-ka shay ee aan taxnay waa tallaabo aad u weyn oo lagu sugi karo boggaga.
Sugidda degelkaaga WordPress waa mid adag laakiin ma aha wax aan suurtagal ahayn. Qalabka saxda ah iyo xirfadaha, waxaad si dhakhso ah u adkeyn kartaa ammaankaaga WordPress oo aad ka fogaato jilayaasha xun.
Dib u soo koobid ahaan, mar walba mareegtaada ka dhig mid casri ah. Intaa waxaa dheer, waligaa ha soo dejin mawduucyada ama plugins-ka goobaha aan la aamini karin. Iyo in la joogo dhinaca nabdoon haddii ay ugu xun dhacaan, had iyo jeer leeyihiin xal gurmad ah oo lagu kalsoonaan karo oo meesha ku yaal.
Waxaan rajeyneynaa inaad heshay dhammaan talooyinka aad u baahan tahay si aad u sugto degelkaaga WordPress, markaa ganacsiga khadka ah. Haddii aad hayso su'aal ama aad u baahan tahay caawimaad si aad u ogaato sida loo sugo boggaaga WordPress, fadlan nagu ogeysii faallooyinka. Nabadgelyo joog!
SEO Sida-loo, Qaybta 1: Waa maxay sababta loo isticmaalo?